Maitiro ekutsvaga yako iPhone, iPad kana Mac kunyangwe pasina internet kubatana | IPhone nhau
Maitiro ekutsvaga yako iPhone, iPad kana Mac kunyangwe pasina internet yekubatanidza
iOS 13 ichave shanduko yakakosha muzvinhu zvakawanda, iine runyorwa rwakakura kwazvo renhau pakati pazvo Zvimwe zvakavanzwa izvo zvisingaite misoro mikuru asi izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya Kune vashandisi. Imwe yacho ndeyechishandiso chitsva «Tsvaga» uye kuti tingaishandisa sei kudzoreredza edu akarasika zvishandiso.
Kusvika ikozvino, kuti vawane yedu yakarasika iPhone, iPad kana Mac, ivo vaifanirwa kuve neinternet kubatana kuti vakwanise kuzviwana pamepu, chimwe chinhu chaisawanzo goneka. Ndi iOS 13 ino shanduko uye ikozvino iwe uchagona kuzvitsvaga kunyangwe kana vasina internet yekubatanidza, nekuda kwemamwe maApple zvishandiso iri pedyo. Isu tinotsanangura kuti inoshanda sei pazasi.
Chokwadi vazhinji venyu vanoverenga mitsara iyi vakashandisa iyo application "tsvaga yangu iPhone" pane inopfuura imwe chiitiko kuti uzive kwawakasiya yako smartphone, iPad kana kunyangwe Mac yako. "hupenyu» asi chii yakanga iine muganho waiita kunge usingakundike: mudziyo wakarasika waida kubatana kweinternet. Ndezvipi zvimwe zvaizotumira nzvimbo yako, kupinda mune yakarasika modhi, uye kuratidza iyo yakarasika meseji yatainge tamisa?
Huye, Apple yakwanisa kukunda iyi muganho, uye kubva kuIOs 13 tichakwanisa kuvawana kunyangwe vasina kufukidzwa kana kwakabatana neinetwork inozivikanwa yeWiFi. Uye izvi ndizvo chaizvo nekuda kwemamwe maApple zvishandiso zviri padyo. Ini handisi kutaura nezve ako zvishandiso, asi nezve chero munhu anopfuura. Chimbo chako chakarasika chinobatana neBluetooth kune chero chinhu chiri padyo neApple kifaa uye choshandisa kubatana kwayo kuti ikuudze iko kubva ku «Kutsvaga» kunyorera. Ehezve, kubatana uku kunoitwa zvakavanzika uye zvakanyorwa, sezvatichazokutsanangurira ikozvino.
Tarisa uone aya mapikicha kubva kuApp yekutsvaga. Yangu iPad Pro haina kubatika, ndosaka ichioneka ine dema skrini, asi ichiri kunditsvagira ini, nekuda kwekuve neIO 13 yakaiswa. Ini ndinogona kuiisa mudanga modhi, kuseta meseji pane iyo yekuvharira skrini, uye kuziviswa kana mumwe munhu akaiwana, vese vasina kuve neinternet yekubatanidza. Izvi nekuda kwekuti iri kubatanidza kuburikidza neBluetooth kune mamwe maApple zvishandiso ayo ari iwo anodhiraivha kune yangu yekutsvaga application.
Kuti izvi zvive zvinobvira mukuwedzera pakuve iine iOS 13 yakaiswa, ndinoda kuva neimwe apuro chishandiso, sezvo iyo data yakavharidzirwa uye inogona kungobviswa neimwe Apple chishandiso icho chine iyo yakafanana account yeICloud uye nekudaro ine kiyi yekuibvisa. Ichokwadi kuti kuchine zvimwe zvisingakwanisike, asi chimwe chezvakakosha chakakundwa nenzira ine hungwaru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekutsvaga yako iPhone, iPad kana Mac kunyangwe pasina internet yekubatanidza
Tsanangudzo haipo. Chishandiso chinofanira kuwanikwa chinofanirwa kuvhenekwa uye nebhatiri rakaringana. Isu takafanana, kana vakaibata, vanongofanira kuidzima kana kuiisa muDFU modhi uye voidzosera. Mhinduro chaiyo ingave ndeyekuti kana iwe uri munzira yakarasika kana yakadzimwa tumira nzvimbo yacho mushure mekunge vadzoreredza iwe uri pachiratidziro chekugashira pakaiswa ID nephasiwedi uye vanogona kuzviita. Zvino nei vasingazviise nenzira iyoyo, hapana anoziva.
Kana iri mune yakarasika kana yakadzimwa maitiro, imhaka yekuti muridzi akaigadzirisa nenzira iyi, saka inofanira kutumira nzvimbo yayo kana ichibatana neWi-Fi.
Apple inogadzirira kuvhura iyo nyowani locator chishandiso
Kurwiswa kweIOS kwakashandiswa neChina kuongorora rudzi rweUighur